HTC tufuru ngalaba R & D maka mgbanwe maka nde dollar 1.100 | Akụkọ akụrụngwa
HTC tufuru ngalaba R & D maka mgbanwe maka ijeri $ 1.100
Google dị na akụkọ ọzọ na oge a mgbe ha nwesịrị nkwekọrịta HTC iji nweta akara nke akụkụ nke onye na-emepụta ekwentị mkpanaaka nkewa. Dị ka ị ga-echeta, na Septemba nke afọ gara aga, a tụlere ohere a ọ bụ ezie na ọ bụghị ruo ugbu a ka ụlọ ọrụ nyocha ahụ nwetara nkwenye niile dị mkpa iji mezuo nnweta a.
Kedu otu ọ ga - esi bụrụ nke ọzọ, ọzọ na Google ha ahọrọ nke ha blog ime ka ozi di nkpa dika onye oru a. Na ntinye ederede, onye edemede ya abụghị ihe na-erughị Rick osterloh, Onye isi oche ndị isi nke Akụrụngwa na Google, na-anabata ndị ọrụ ọhụrụ ya na ụlọ ọrụ ahụ. N'oge a, ekwesiri ighota ya Google enwetala otu ndị ruru eru ruru 2.000 ndị sitere na ngalaba ahụ 'Kwadoro site na HTC', nke, tinyere ihe ndị ọzọ, nwere ọrụ ruo taa maka mmepe nke ọrụ dị iche iche dịka Google Pixel mobile.
1 Google na - ahọrọ uzo ngwangwa ma weghaara ngalaba nyocha na mmepe nke HTC iji mepụta ọdụ ya ọzọ
2 N'agbanyeghị na erere ngalaba nyocha na mmepe ya, HTC agaghị akwụsị igwe igwe
Google na - ahọrọ uzo ngwangwa ma weghaara ngalaba nyocha na mmepe nke HTC iji mepụta ọdụ ya ọzọ
Iji nweta obere ka mma na echiche ahụ na Google zụtara ụlọ a kpọmkwem site na HTC iji gbanwere 1.100 nde dollar, gwa gị nke ahụ 'Kwadoro site na HTC' abụghị ihe ọzọ karịa ngalaba nyocha na mmepe nke HTC nwere ruo ugbu a. Nke a pụtara na Google zụtara ihe ọ bụla na-erughị ngalaba na-ahụ maka mmepe teknụzụ ọhụrụ nke HTC, otu ihe ahụ dị n'aka ruo ọnwa ole na ole gara aga nke ịmepụta teknụzụ niile dị na ekwentị nke akara Taiwan.
N'ụzọ dị mfe, ọ bụ ezie na ọ dị oke ọnụ, Google ekwela nkwa ịghara ịdabere na ụlọ ọrụ ndị ọzọ iji mepụta ekwentị ya na ngwaọrụ ndị na-abịanụ nke ga-ada n'ahịa ahụ. N'aka nke ọzọ, ọ kwela nkwa na ọgbọ ọhụụ ga-aga n'ihu maka Pixel ebe ọ bụ na ọrụ a dabere n'ọtụtụ afọ na otu injinia ndị ọ goro ọrụ na ndị ga-abụ akụkụ nke ndị ọrụ ya buru ibu.
Dị ka a pụrụ ịgụ na ntinye bipụtara site Rick osterloh:
Ndị ọrụ ọhụrụ a na-eweta ọtụtụ iri afọ nke nweta ọtụtụ 'mkpụrụ mbụ', karịsịa na ụlọ ọrụ ama ama, nke gụnyere ịmalite 3G mbụ na 2005, nke mbụ emetụla aka na ekwentị na 2007, na nke mbụ igwe igwe na 2013. Nke a bụkwa otu ngwaọrụ ahụ anyị ji arụ ọrụ. jikọtara ọnụ na mmepe nke Pixel na Pixel 2
N'agbanyeghị na erere ngalaba nyocha na mmepe ya, HTC agaghị akwụsị igwe igwe
Na nke HTC, eziokwu ahụ bụ na ha rere ngalaba nyocha na mmepe ha apụtaghị na ha ga-ahapụ ụwa nke ekwentị mkpanaka, na ntụle, mgbe ozi a niile ga-apụta HTC wepụtara nkwupụta gọọmentị na-ekwupụta na ụlọ ọrụ ahụ ga-aga n'ihu na-ebupụta ọhụụ ọhụrụ.
Ọ bụrụ na anyị attentionaa ntị n'ihe niile ndị nyocha na-ekwu banyere nzụta, a na-atụ anya na HTC ga-aga n'ihu n'ime ahịa ekwentị mkpanaka n'agbanyeghị na ọnụ ọgụgụ ndị na-ebupụta ga-abụ nnukwu ahịa ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ ahụ ga-amalite lekwasị anya naanị n'ụdị ndị kacha erite uru a na-atụnye ha kwa afọ. N'aka nke ọzọ, o yikarịrị ka HTC ga-amalite ilekwasị anya na ụdị ahịa ndị ọzọ ọ bụ akara aka taa, dị ka mmepe nke iko ọhụụ ọhụụ ọhụrụ ma ọ bụ ahịa Internetntanetị nke Ihe.
Returnlaghachi na Google, site na itinye ego a doro anya na ụlọ ọrụ ahụ chọrọ ilekwasị anya na mbọ ya na mpaghara ahịa nwere ike ịhapụ ọtụtụ uru dịka mmepe na imepụta akụrụngwa gị. Dị ka ị ga-echeta, afọ ole na ole gara aga, ha lekwasịrị anya na ịhapụ ụlọ ọrụ ndị ọzọ ịrara onwe ha nye n'ichepụta ngwaahịa ha mgbe ha mepụtara ngwanrọ zuru oke, omume nke, kemgbe ọtụtụ afọ, agbanweela kpamkpam na nkà ihe ọmụma na n'ụzọ nke igbu kwuo na Google emesịa webata usoro ndị ọkachamara ruru eru na ndị ọrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » HTC tufuru ngalaba R & D maka mgbanwe maka ijeri $ 1.100
Ndị a bụ premiere nke batara na Netflix na HBO na February 2018